Ufike nogandaganda ethi uzodiliza izisikole ongakhokhelwanga | News24
Ufike nogandaganda ethi uzodiliza izisikole ongakhokhelwanga
Hammersdale - Kusize inkani kowesilisa owakha udonga lwesikole obesabisa ngokudiliza izindonga zesikole uma bengamkhokheli.
USanele Shabalala okunguyena owakha izindonga zesikole samabanga aphakeme iSikhethuxolo eHammersdale uthi lesi sikole simikweleta imali engango-R56 000 ngemuva kokuthi akhele lesi sikole amatafula angu-45, wathenga nezitina ezingu-36 000 esitolo sezimpahla zokwakha ngegama lakhe.
“Kusize inkani yami ukuthi baze bakhiphe elithi bazoyikhokha ngoMsombuluko imali, ukube angiyanga nogandaganga ngivimbe isango ngemoto yami ngithi akungeni lutho ehamba ngemoto ngabe angazi ngoyithola nini imali yami,” kuchaza uShabalala.
Elinye ilungu lesigungu sesikole elingathandanga kudalulwa igama litshele abe-Eyethu KZN ukuthi kuningi ukukhohlakala okuqhubeka kulesi sikole .
OLUNYE UDABA:Umakhi udubule wabulala uzakwabo, walimaza abanye
“Emasontweni amathathu adlule kukhishwe imali engu-R20 000 kuthiwa kwenzelwa izingane iphathi kodwa thina njengamalungu esigungu sesikole asaziswanga ukuthi kukhona imali eyisamba esingako ezokwenza iphathi.
“Mina ngifuna ukuthi uMnyango wezeMfundo ungenelele, ngoJuni izingane azilibhalanga iphepha leSocial Sciences (SS) ngenxa yokuthi uthisha waleso sifundo wafika edakiwe ngosuku lokubhala,” kubeka lona.
Uphethe ngokuthi okubi beyisikole sebeyabona ukuthi ezinganeni ezingaphezulu kuka-100 ezibhalisele ukuhlolwelwa kukamatikuletsheni kuzophasa izingane ezine kuphela.
Amahlebezi athi kukhona nothisha abaningi abaqashwe kulesi sikole kodwa bengenazo iziqu zokufundisa.